Indlu yemibono - isiphephelo sabahambi - I-Airbnb
Indlu yemibono - isiphephelo sabahambi
Monticchio, Abruzzo, i-Italy
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Francesco E Valentina
U-Francesco E Valentina Ungumbungazi ovelele
Sanibonani nonke, singuFrancesco kanye no-Valentina, umbhangqwana "wamaRoma" owanquma ukushiya isiphithiphithi saseNhlokodolobha ukuze bathole kabusha isigqi semvelo. UFrancesco unemvelaphi ka-Aquilan futhi ukugxila kakhulu endaweni yakhe kuhilele u-Valentina kule mpilo entsha ejabulisayo. I-Casina delle delle Idee ifaka abantu bethu bobuciko oguqukweni oluqhubekayo futhi iqhubeka nohlelo lwethu lokuphila, isebenzisa izinto ezigaywe kabusha kuphela kanye nemikhiqizo evela engadini yethu.
I-La Casina delle Idee iqukethe ikhishi elikhulu elitholakala kubavakashi abaneziko nazo zonke izinto zikagesi, bese sinegumbi lokuphumula elinombhede usofa, i-Smart TV, i-wi-fi kanye nomtapo wezincwadi lapho kunezincwadi nezincwadi zezithombe ezitholakala kuzivakashi. Ekugcineni kunendlu yokugezela kanye negumbi lokulala. Ngaphandle kunegceke elincane elifinyeleleka ngezindawo zokupaka ezizimele ezivaliwe. Futhi ungavakashela ipulazi lethu elincane ngokucela.
I-HDTV ene- I-Netflix, I-Amazon Prime Video, Isevisi evamile ye-cable kamabonakude
ubusuku obungu-7 e- Monticchio
I-La Casina delle Idee itholakala esigodini sase-Aterno ngaphansi kwedolobha i-L'Aquila, sizungezwe i-Central Apennines eluhlaza phakathi kwe-Regional Park "Sirente Velino" kanye ne-National Park "Gran Sasso ne-Monti della Laga". Eduze kwethu sinezindonga zamatshe emvelo zokukhuphuka, amachibi nemifula, izindlela zamabhayisikili, imizila yemvelo, Imigede yaseStiffe, izindawo zemivubukulo, ama-ski slopes, izindawo zokulondoloza imvelo, izigodi ezinomlando ezifana ne-Rocca Calascio ne-Santo Stefano di Sessanio.
Ibungazwe ngu-Francesco E Valentina
Kuyo yonke indawo izivakashi zizoba nokutholakala okugcwele kuka-Valentina noFrancesco abazokweluleka ngohambo, uhambo, izindawo zokudlela, izindawo nezindawo onentshisekelo kuzo ongazivakashela, Ngaphakathi kweCasina kukhona nezincwadi ezikhuluma nge-Abruzzo nedolobha lase-L'Aquila. Kuningi ongakubona nokwenza futhi inhlangano enhle yokuhamba ikuvumela ukuthi ujabulele ngokugcwele konke okuhlangenwe nakho okunikezwa yile nsimu engalungile.
Kuyo yonke indawo izivakashi zizoba nokutholakala okugcwele kuka-Valentina noFrancesco abazokweluleka ngohambo, uhambo, izindawo zokudlela, izindawo nezindawo onentshisekelo kuzo o…
UFrancesco E Valentina Ungumbungazi ovelele